Firehetan’ny tobim-pamokarana herinaratra Andekaleka: hentitra amin’ny hikarohana ireo nahavanon-doza ny filoha | NewsMada
Mirona mankany amin’ny « sabotazy » ka tsy ho vitavita mora. Nidina ifotony tany Andekaleka ny filoha Rajoelina Andry, omaly. Hentitra ny tenany nilaza fa hosaziana ireo tao ambadiky ny firehetana sy ny fipoahan’ny tobim-pamokarana any an-toerana.
“Efa fantatra fa tsy vao izao no nisy ny fikasana hanapoaka an’Andekaleka”, hoy ny filoha. Nijoro vavolombelona ny tenany nitantara fa nisy andian’olona maromaro niresaka taminy tamin’ireny hetsika teo amin’ny kianjan’ny 13 mey ireny ny taona 2018. Nanambara ny hanapoaka an’Andekaleka izy ireo raha omena 40 tapitrisa Ar. “Tsy nanaiky aho ka sanatria ve hisy hanao an’izany amin’izao ?”, hoy izy. Manoloana izany, nanao antso avo amin’ireo mahafantatra ity raharaha ity ny filoha hanoratra mivantana any amin’ny minisitra na koa any amin’ny fiadidina ny Repoblika. Hotazonina ny tsiambaratelo, ary homena tambiny mihoatra amin’ny mety ho nanakarama azy, araka ny nambarany. “Tsy maintsy ho tratrarina ny nanao izao ary ho saziana araka ny sazy sahaza azy ireo nahavano-doza. Tsy mety ny fisainana amin’ny fanapotehana tahaka izao. Antony nidinako aty hijery ny tranga niseho izany”, hoy ihany izy.
Noho ny hevitra politika tsy mitovy
Nambaran’ireo teksnisianina rahateo fa tsy mitombina ny fipoahana mialoha ny firehetana. Mety maro ireo naratra na namoy ny ainy raha ohatra nandritra ny famonoana afo ireo mpiasan’ny Jirama vao nisy ny fipoahana. Nanome toromarika ny filoha ny amin’ny hamantarana ireo niditra tao amin’ny toby mialoha ny tranga niseho nefa tsy tokony hiasa na ho tafiditra tao. “Mila jerena izany hoe iza ny olona mety nanao an’io, mba lazao anay. Fantatray fa misy aminareo no mahafantatra izany ka tokony mba fantarina izany “, hoy ihany ny filoha. Nanteriny fa tsy maintsy atao ny famotorana fa tena ankasomparana ny firehetana sy fipoahana. “Tsy ekena ny famotehana fananam-bahoaka raha noho ny tsy fitoviana hevitra politika”, hoy ny filoha. Notsiahiviny fa anisan’ny delestazy izao noho ny tsy fahampian’ny famokarana jiro.
Tsy maintsy lazaina amin’ny vahoaka ny marina
Manoloana izany, hiasa andro aman’alina ny Jirama ka handeha tsikelikely miandalana ireo “groupe” maromaro, any an-toerana ka farafahatarany handeha avokoa izany hatramin’ny volana jolay any. Nidera ireo mpiasan’ny Jirama ny filoha noho ny asan’izy ireo ho an’ny vahoaka. “Reharehan’ny firenena Andekaleka fa hany toby famokarana herinaratra antsika malagasy madiodio ary famokarana mora indrindra eto Madagasikara satria 5 Ar ny KWH eto. Hidina 100 heny ny vidin’ny jiro raha vitantsika ny manao ohatra itony”, hoy izy.
Notsindriny fa hataony ezaka rehetra, hatao toy ny any Sahofika izany. Ho vita afaka 5 taona. “Tsy maintsy lazaina ny vahoaka ny marina, fa tsy hiainohaino fotsiny hoe tapaka ny jiro. Hivaha ny ampahany maro amin’ny olana jiro ao Antananarivo hatrany Antsirabe ary Moramanga rehefa vita ireo rehetra ireo”, hoy ihany izy.